‘विकास र समृद्धिका लागि मतदान’ – Sajha Bisaunee
‘विकास र समृद्धिका लागि मतदान’
। २५ माघ २०७४, बिहीबार १६:४१ मा प्रकाशित
‘हाम्रो जिल्लामा आजसम्म गाडी पुगेको छैन, खच्चडबाटै सामान ढुवानी गर्नुपर्छ’ हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर चौलागाईले भने, ‘सरकारी कामका लागि सदरमुकामनै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, भोकमरीले हामीलाई नछोड्ने भयो । हामी अभाव र पीडाले थलिएका छौं, अब कर्णालीको मुहारमा खुशी ल्याउनु छ ।’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा बुधवार मतदान गरेपछि चौलागाईंले कर्णालीको अभाव र गरिबीविरुद्ध लड्न आफूले मतदान गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले जनताको मत पाएर विजयी भयौं, आज मतदान गरेर अरुलाई विजयी गराउँदै छौं । हिजो जित्नेहरूले केही गरेनन् भनेर गुनासो गर्ने बेला यो होइन, अब हामीले मिलेर कर्णालीको मुहार फेर्नुछ ।’ हालसम्म सडक संजालमा नजोडिएको हुम्लामा सडक पु¥याउनुपर्ने र भोकमरी अन्त्यका लागि निर्वाचित हुनेहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हुम्लामा सडक पुगेमा मात्र आफ्नो मतको सदुपयोग हुने उनले बताए ।
प्रदेश ६ को गरिबी र अभाव अन्त्यका लागि आफूले मतदान गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनले भनिन्,‘हाम्रो प्रदेशमा अभावले थलिएको कर्णाली छ, कर्णालीको समृद्धि नभएसम्म प्रदेशको विकास पनि सम्भव छैन । कर्णालीको मुहार हसाउँन सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, हामीले अब त्यसका लागि प्रत्यन गर्नेछौं ।’ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको साझा प्राथमिकता अब कर्णालीको अभाव र गरिबी अन्त्यका लागि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै प्रदेश सभाका सांसद धर्मराज रेग्मीले जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिको ध्यान समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले संविधान अनुसार सबै चुनाव सकेका छौं, अब हाम्रो ध्यान जनतालाई अभाव र गरिबीबाट मुक्त गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्यले स्थानीय सरकारका साझा समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेबहादुर रावतले बताए । ‘हाम्रो प्रदेश सबैभन्दा गरिब छ, कर्णालीको आफ्नै पीडा छ’ उनले भने, ‘अब हामीले धेरै मेहेनत गर्नुपर्नेछ, जनतालाई उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नेतर्फ सबै जुटौं ।’ अब केन्द्र सरकारले पनि कर्णालीलाई विशेष लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मतदानका क्रममा यस क्षेत्रको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरू उत्साहित थिए । आफूहरूको मत समग्र प्रदेशको समृद्धिका लागि भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसका लागि दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।
शतप्रतिशत मत खस्यो
प्रदेश नम्बर ६ मा शतप्रतिशत मत खसेको छ । बुधवार सम्पन्न मतदानमा एक सय ९८ जना मतदाताले नै मतदान गरेका हुन् । मतदानमा प्रदेश ६ का ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरे । यस्तै प्रदेश सभाका ४० जना सांसदहरूले पनि आफ्नो मतदान गरेका हुन् ।
मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मेदिनीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश ६ बाट आठ जना निर्वाचित हुनेछ । जसका लागि एमालेका पाँच, माओवादीका तीन र कांग्रेसबाट चार जना गरी १२ जना उम्मेदवार छन् । यो प्रदेशमा सबै मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मतदानमा सहभागी भएका मतदाताहरूले विधायकको काम गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले निर्वाचित भएपछि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
बुधवार सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । बुधवारराती अवेर सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी भएका हुन् । महिला, अपाङ्ग र दलित कोटामा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रदेश ६ बाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा अपाङ्ग कोटाबाट उम्मेदवारी दिएका जीवन बुढाले तीन हजार सात सय २० मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोपालप्रसाद शर्मा नौ सय ७८ मत प्राप्त गरे । २०५२ सालमा माओवादीमा आवद्ध भएका कालिकोटका जीवन बुढाले विजयी भएपछि प्रदेश र जिल्लाको समृद्धिमा काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनी माओवादीमा गाउँ कमिटी, छापामार हुँदै माओवादीको सेनाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सेना समायोजनपछि पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य भएर उनले काम गरिरहेका छन् । यस्तै एमालेकातर्फबाट सुर्खेतकी नन्दा चपाईं र मुगुकी कविता बोगटी विजयी भएका छन् । चपाईं लामो समयदेखि एमालेको राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै आएकी छिन् । यस्तै माओवादीबाट उम्मेदवार बनेकी हुम्लाकी युटोल तामाङ विजयी भएकी छन् । महिलातर्फको कोटामा उम्मदवारी दिएकी कांग्रेसकी सूर्यदेवी मल्ल पराजित हुन पुगेकी छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म खुल्लातर्फको तीन जना सदस्यको मतपरिणाम भने सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।
वडा सदस्यमा पराजित, सांसदमा विजयी
यसैबीच प्रदेश नं. ६ बाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नरपति लोवार विजयी भएका छन् । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा पराजित भएका उनी बुधवार सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभाको सांसदमा विजयी भएका हुन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी दलित कोटाबाट विजयी भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सांसदमा विजयी नरपति लोहार गत बैशाखमा कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाको वडा नं. ८ को वडा सदस्यमा निर्वाचन लडेका थिए । तर उनी माओवादीका उम्मेदवारसँग पराजित हुन पुगेका थिए । वडा सदस्यमा पराजित भएका उनी बुधवार भने सांसदमा विजयी भएका हुन् । लोवारले तीन हजार ६ सय ६६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार मित्रलाल सार्की नौ सय ६० मत प्राप्त गरे । विजयी भएपछि लोवारले आफ्नो राजनीतिमा निरन्तरको लगानीले सफलता पाएको बताए ।
कालिकोट फुकोटका नरपति २०४७ सालमा एमालेमा आवद्ध भएका थिए । उनले पञ्चायती व्यवस्था हुँदा २०४४ सालमा साविकको फुकोट गाविसको उपप्रधानपञ्चको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । एमालेमा रहेर निरन्तर राजनीति गरेका उनी २०५४ सालको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । जातिय विभेदविरुद्ध लड्दै आएका नरपतिले विजयी भएपछि छुवाछुत अन्त्यका लागि लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । द्वन्द्वकालमा आठ वर्षसम्म भारत बसेका उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा विजयी भएपछि जनताका लागि काम गर्ने जनाए ।